Ahoana no Hananana Tokantrano Sambatra? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ngabere Norvezianina Nzema Ossète Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Twi Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Manoro hevitra momba izany ny Baiboly. Mandaitra ny toroheviny, satria avy amin’i Jehovah Andriamanitra, ilay namorona ny fanambadiana. Resahina ao hoe inona no toetra ratsy tokony hohalavirina sy ny toetra tsara tokony hananana, mba hahasambatra ny tokantrano. Atorony koa ny fomba tokony hifampiresahan’ny mpivady.—Vakio ny Kolosianina 3:8-10, 12-14.
Tokony hifanaja sy hifanome voninahitra ny mpivady. Ho sambatra izy ireo raha samy manaiky ny anjara toerana nomen’Andriamanitra azy ao an-tokantrano.—Vakio ny Kolosianina 3:18, 19.
Ahoana no hampaharitra ny fanambadiana?
Haharitra ny fanambadiana raha mifankatia ny mpivady. Manoro antsika ny atao hoe tena fitiavana Andriamanitra. Modely tonga lafatra izy sy Jesosy Zanany, satria nampiseho fitiavana feno fahafoizan-tena.—Vakio ny 1 Jaona 4:7, 8, 19.
Avy amin’Andriamanitra ny fanambadiana, ka tsy hisaraka mihitsy ny mpivady raha manaja an’izany. Tiany haharitra ny fanambadiana mba ho voaro ny fianakaviana. Azo tanterahina tsara izany satria nataony hifameno ny lehilahy sy ny vehivavy, na eo amin’ny lafiny ara-batana na eo amin’ny lafiny ara-pihetseham-po. Nataon’Andriamanitra araka ny endriny koa ny olona ka afaka maneho fitiavana toa azy.—Vakio ny Genesisy 1:27; 2:18, 24.
Inona no Tena Mahasambatra? Be Fitiavana